Deg Deg: Khilaaf Adag Oo Soo Kala Dhex Galay Xukuumadda Jabuuti Iyo Ganacsade Ina Geelle Arab+Ganacsadaha Oo Hargeysa Ku Sugan Iyo Nuxurka Halka Khilaafku Ka Curtay - Wargane News
Home Somali News Deg Deg: Khilaaf Adag Oo Soo Kala Dhex Galay Xukuumadda Jabuuti Iyo...
Warar soo if baxaya ayaa waxay sheegayaan in khilaaf adag soo kala dhex galay xukuumadda Jabuuti gaar ahaan Madaxwaynaha Ismaaciil Cumar Geelle iyo ganacsade Ina Geelle Arab oo ah ganacsada sharaabka SBI.
Waxaana xogahani ay sheegeen in khilaafkan adag ee ka dhex qarxay ganacsadaha iyo xukuumadda Jabuuti uu salka ku hayo ismaandhaaf ka dhashay mashaariic ganacsaduhu ka hirgaliyay Somaliland iyo arrimo kale oo la xidhiidha cashuuro ganacsigiisa la xidhiidha.
Xogahan ayaa waxay iftiiminayaan in ganacsadahan Ina Geelle Arab loo soo gooyay waaran qabasho ah,waxaana uu ganacsaduhu baajiyay safar u qorshaysnaa inuu ku tago Jabuuti,balse markii danbe uu u badalay dalka Imaaraaddka Carabta.
Sidoo kalena xogo u dhuun daloola ganacsadaha ayaa waxay sheegayaan in uu wakhti xaadirkan ku sugan yahay magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland.
Waxaana xalinta khilaafkan guntiga u xidhay sida la sheegay madax-dhaqameed iyo odayaal.
Ilaa hadda lama garanayo halka uu saldhigan doono khilaafkan adag ee ka dhex qarxay xukuumadda Jabuuti iyo ganacsadaha reer Jabuuti ee Ina Geelle Arab.